मारिया जोयपर्ट मायर - Safal Stories
Home Motivational Biographies Science And Technology मारिया जोयपर्ट मायर
पुरस्कार पाउँदा त्यती उत्साह थिएन, जति त्यो काम गर्दा थियो
मारिया जोयपर्ट मायर प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुन्। न्युक्लियरको संरचनाको खोज गरेबापत उनले नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेकी थिईन् । जर्मनीकी नागरिक यी वैज्ञानिकको जन्म २८ जुन, १९०६ मा भएको हो ।
मारिया जोयपर्ट मायरको जन्म बाबु फ्रेडरिक् जोयपर्ट र आमा मारिया नी वोल्फ़को सन्तानको रुपमा जर्मनीमा भएको थियो। उनी आमाबाबुको एक मात्र सन्तान थिईन्। मारिया चार वर्षकी भएपछी मारियाको परिवार गोटिनजेनमा बसाई सर्यो र उनको पढाई पनि त्यहींको एक निजी विद्यालयमा सुरु भयो, जुन विद्यालय महिलाको शैक्षिक उन्नतीको लागि खोलिएको थियो । उनका बाबु प्रध्यापक थिए । स्कुलको पढाइ सकेपछि सन् १९२४ मा मारिया गोटिनजेन विश्वविद्यालयमा भर्ना भइन् र गणित विषय पढ्न थालिन् । भौतिकशास्त्रमा विशेष रुची राख्ने उनी त्यसपछि भौतिकशास्त्रमा पी.एच.डि गर्न थालिन् । पी.एच.डि मा उनको थेसिसको विषय थियो, ” theory of two-photon absorption by atoms.”
मारिया जोयपर्ट मायरको चौबिस वर्षको उमेरमा रसायनशास्त्री जोशेफ ई. मायरसंग भयो । विहेपछी उनीहरु दुवैजना वाल्टिमोर गए । मारियाका श्रीमानले युनिभर्सिटीमा रसायनशास्त्र पढाउँथे भने युनिभर्सिटीमा उनी पूर्ण रुपमा जागिरे नभएको हुँदा रसायनशास्त्र विभागकै कक्षाहरुमा कहिलेकाहीं पढाउँथिन् । सन् १९३० देखि १९३९ सम्म श्रीमान र रसायन भौतिकशास्त्री कार्ल एफ. हर्ज्फेल्डसंग मिलेर उनले रसायन भौतिकशास्त्र र भौतिक रसायनशास्त्रमा काम गरिन्।
सन् १९४९ को अगाडी मारियाले क्याथोलिक युनिभर्सिटीका विद्यार्थी अल्फ्रेड लि स्कलरसंग मिलेर अप्टिकल प्रपर्टीजलाई कसरि केमिकल स्ट्रक्चरले प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धानमुलक लेख लेखिन् । त्यतिबेला उनले पाठ्यपुस्तक पनि लेखिन् । सन् १९४० मा मारिया र उनका श्रीमान मिलेर ‘स्टाटिस्टिकल्स मेकानिक्स’ नामक पुस्तक प्रकाशन गरेकी थिईन्। संसार दोस्रो विश्वयुद्धमा फसिरहेको बेला उनी भने युरोनियम आइसोटोपको सेपरेसनमा काम गरिरहेकी थिईन् ।
मारियाले सन् १९४५ मा युनिभर्सिटी अफ सिकागोमा सह -प्राध्यापक पदमा बिना तलब काम गरिन्। अर्को वर्ष उनले एर्गोंने नेशनल ल्याबमा भौतिकशास्त्रको अनुसन्धानकर्ताको रुपमा काम गरिन् । सन् १९४७ मा उनले isotopic abundances को अनुसन्धान गरिन् र १९४८ मा आफ्नो त्यो खोजको लेख प्रकाशन गरिन्, जसको शिर्षक थियो ‘On Closed Shells in Nuclei’ । १९५० मा मारिया आफ्नो श्रीमानसंग मिलेर विज्ञानसम्बन्धि कक्षा र सेमिनारमा सहभागी हुँदै विदेश भ्रमण गरे । सन् १९५५ मा मारियाले हन्स डि. जेन्सेनसंग मिलेर ‘Elementary Theory of Nuclear Shell Structure’ नामक पाठ्यपुस्तक निकालिन्। उनले विभिन्न देशमा गेस्ट लेक्चर बनेर समेत काम गरिन् ।
जीवनभर विज्ञानको क्षेत्रमा काम गरेकी मारिया जोयपर्ट मेयरले न्युक्लियर संरचनाको खोजमा महत्वपूर्ण योगदान गरेबापत सन् १९६२ मा जे. हेन्स. डि. जेन्सेन र युगेने विग्नेर संगै नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरिन्। उनलाई थुप्रै कलेजहरुबाट मानार्थ डिग्रीले सम्मान गरियो। सन् १९७२ फेब्रुअरी २० मा मृत्यु भएपछी उनको भौतिक शरीरलाई स्यान डिएगोमा रहेको एल क्यमिनो मेमोरियल पार्कमा अन्त्यष्टी गरिएको थियो। हरेक वर्ष स्यान डिएगोमा मारियाको सम्झनामा युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाले महिला अनुसन्धानकर्ताहरुको सम्मेलन गर्ने गर्छ र त्यहाँ विज्ञानका वर्तमान मुद्दाहरुमाथि छलफल हुन्छ।
काम गर्दा आफ्नो रुचिको काम रोज्न सकियो भने पुरस्कारको लोभमा नभई आफ्नो आत्मसन्तुष्टीको लागि काम गरिन्छ र आफूभित्र भएको सिर्जनात्मक क्षमता भरपूर रुपमा बाहिर ल्याउने कोसिस गरिन्छ, त्यसमा उत्साह जाग्छ र आफूले शत प्रतिशत दिने कोसिस गरिन्छ। र, त्यो लगनशीलता र जोसले सफलता तथा पुरस्कार दिलाउँछ, जसरि वैज्ञानिक मारिया जोयपर्ट मेयरलाई दिलायो।
Previousसंघर्षबाट उठेका ज्याक माको असफलताको कथा
Nextकसैको वियोगमा परेको व्यक्तिलाई कसरि सम्झाउने ?